Maamulka cusub ee golaha deegaanka Xudur oo maanta si rasmi ah u howlgalay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka cusub ee golaha deegaanka Xudur oo maanta si rasmi ah u...
Maamulka cusub ee golaha deegaanka Xudur oo maanta si rasmi ah u howlgalay
Xudur (SONNA) Xafladani oo ay soo qaban qaabiyeen Maamulka Cusub ee Golaha Degaanka Degmada Xudur ayaa waxa ka soo qeybgaley Culimaa’udiin, Waxgarad, Haween, Dhalinyaro, Saraakiisha Booliska iyo Marti sharaf kale.
Ujeedada loo qabtey Xaflada ayaa waxay tahay in lagu daah furo Xafiisyada Xubnaha goloha degaanka ee degmada xuddur oo dhowaan la dhisey.
Ugu horeyn waxa munaasabada ka Hadley Gudddoomiyaha Degmada Xuudur Maxamed Macalin Axmed isagoona sheegey in laga bilaabo maanta xafiisyadii degmada oo loogu adeegayo Bulshada ay furan yihiin wuxuuna bulshada ka codsadey in ay la shaqeeyaan isla markaasna ay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo.
Taliyaha Ciidamada Booliska gaarka ah ee Gobolka Bakool Korneel Cabdulaahi Xasan Cabdule Qadaafi oo munaasabada ka Hadley ayaa shacabka ku buuriyey in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni dari.
Bulshadii ka soo qeyb gashey munaasabada ayaa soo dhoweeyey xafiisyada cusub waxayna balan qaadeen in lashaqeynayaan.
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Bakool ahna kusimaha Guddoomiyaha Cabdulaahi Maxamed Nuur Snake oo gabagabadii xaflada soo xirey ayaa xubnaha xildhibaanada kula dardaarmey in aysan qabiil u shaqeynin qaranka u shaqeeyaan.
Xafladaan ayaa aheyd tii ugu horeysey oo maamulka degmada Xudur uu qabto tan iyo markii maamulkaan cusub ladhisey mudo hada laga joogo 16 maalmood ka hor.
Previous articleW/Diinta iyo Awqaafta JFS oo 400 oo kutubo ah ku wareejisay Jubbaland
Next articleMeydka Gabar Soomaali aheyd oo laga helay gobalka Queensland ee dalka Australia